Hanohana an’i Mohamed Salah i Azia Afovoany Amin’ny Mondialy ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Hanohana an'i Mohamed Salah i Azia Afovoany Amin'ny Mondialy ao Rosia
Voadika ny 03 Mey 2018 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, Ελληνικά, Français, русский, English
Mohamed Salah. Pikantsary avy amin'ny lahatsary YouTube ‘Drawing Salah…Liverpool’ navoakan'ny Artista Sanil tamin'ny 15 Desambra 2017.
Tamin'ity taom-pilalaovana ity, nanoritsoritra fientanentanana manerana ny lasitry ny tantaran'ny baolina fandaka (football) ilay Ejiptiana mpilalao baolina fandaka Mohamed Salah, ary tsy mbola vita ny asany.
Alohan'ny fiafaran'ity herinandro fiandohan'ny volana mey ity, hamandrika ny toerany ho eo amin'ny dingana famaranan'ny fifaninanana malaza indrindra eo Eoropa ny ekipan'i Liverpool misy an'i Salah. Mety hanamontsana ny isan'ny fampidiram-baolina tsara indrindra amin'ny lalao 38 ao anatin'ny taom-pilalaovana Premier League anglisy ihany koa izy izay efa ilaharany amin'izao ny isam-baolina 31 tafiditra.
Avy eo, rehefa hitakona ny taom-pilalaovan'ny klioba, dia ho avy ihany koa ny mety hijerena kely an'i Ejipta amin'ny Mondialy.
Efa niara-dalana taminy isaky ny ambaratongam-pisondrotana koa ireo mpiondana football any amin'ireo firenena sôvietika taloha maro miozolomana.
‘Mampiditra ny tena Islam’
Efa nisy ny fotoana toerana nifanasan'ny mpankasitraka ny as arzantiniana Lionel Messi sy ny kintana paortiogey Cristiano Ronaldo vangy ireo vondrona media sosialy miompana amin'ny baolina danfaka. Fa tsy izany intsony no izy ankehitriny.
Ankoatra ny figadona mamirapiratra sy ny fahaizana tsy mila ezaka be, azo azavaina amin'ny fijoroany am-pireharehana ho miozolomana manaraka ny fomba ny firoboroboan-dazan'i Salah ao Azia Afovoany sy ny fahazotoany mandray anjara amin'ny asa fanasoavana sy fiantràna any Ejipta sy an-toeran-kafa.
Ao Liverpool, ny zavabitany amin'ny fampidiram-baolina moa dia nahatonga fanandratana sy hiaka malaza eny amin'ny tohatra fijerevam-baolina miresaka firosoam-pinoana mankany amin'ny Islam. Saingy tsy mitovy amin'ireo olo-malaza hafa mitovy asa aminy manerana izao tontolo izao, manavatsava ho mpitondra fanevan'ny fanetre-tena kosa i Salah.
Ny fitondra-tenany ivelan'ny kianja indrindra no tena mahatonga ny fifantohan-dresaka maro amin'ireo vondrona Facebook Aziatika Afovoany.
Tokony ho ohatra amin'ny fitondra-tena tsara ny miozolomana tsirairay avy. Mampiditra ny tena Islam amin'izao tontolo izao i Salah sy ny lazany amin'ny fahaizana milalao baolina fandaka sy ny fitondra-tenany tsara.
Ao amin'ny vondrona Facebook Football an'i Tajikistan, misongadina ho valiny iraisan'ny besinimaro ho mitondra fanabeazana tsara indrindra i Mo Salah rehefa naroso izany fanontaniana izany sy ny hoe iza no footballer mety hahazo ny amboaran'ny taona.
Eny fa na dia ireo hiringiriny amin'ny fitiavana an'i Ronaldo sy i Messi ao amin'ny vondrona aza dia niteny fa tokony handeha any amin'ny “rahalahy miozolomana” izay derain-dry zareo amin'ny isan'andininy hoe “Liverpool with Salah, Salah with Allah” [Liverpool miaraka amin'i Salah, Salah miaraka amin'i Allah] ny loka.
Saingy nahatratra ny tsy mampino intsony ny fiantorahana mankany amin'i Salah ao amin'ny firenena iray mpifanolo-bodirindrina amin'i Tajikistan, dia ao Uzbekistan izany, fa nisy fianakaviana iray nanome ny anaran'ny zananilahy avy amin'ny anarany araka ny tatitra iray navoakan'ny RFE/RL amin'ny teny Ozbeka.
Mitodika any Rosia ny maso rehetra amin'ity asara [ilabolantany avaratra] ity
Nanamarika ny nampidirany baolina maro tamin'ny fiantorahana amin'ny tany manao ny sajdah hanomezana ny famirapiratana ho an'i Allah i Salah tamin'ity taom-pilalaovana ity.
Saingy nanivaka tamin'izany kosa ny baolina roa tafidiny tamin'ny lalao mandroso tamin'ny manasa-dalan'ny Champions League nifanandrinany tamin'i Roma. Na dia nahatontosa ny iray amin'ny ezaka manokana nataon'ny tenany tsy ho hay adinoina indrindra teo amin'ny tantaran'ny fifaninanana tampony ao Eoropa aza i Salah dia tsy nandà ny hihorakoraka manoloana ny ekipa nisy azy taloha, ka vao maika izany nahazoany dera maromaro kokoa ho azy.
Mety hanao toy izany ihany izy amin'ny 6 mey, na dia mety hanamontsana ny fampidiram-baolina betsaka indrindra amin'ny Premier League aza izy amin'io fotoana io rehefa hifanandrina amin'i Chelsea, klioba iray nanala azy rehefa nanolotra varavarana misokatra vitsy dia vitsy mba nahafahany milalao ao amin'ny ekipa voalohany roa taona lasa izay.
Ho ao anatin'ny taom-pilalaovana tsy mampino i Salah raha mahazo ny voninahitra tamin'ny famaranan'ny Champions League amin'ny faran'ny volana. Efa manombana ny ho fizotran'ny lalao hihaonany sy ny ekipan'i Liverpool amin'i Ronaldo sy i Real Madrid sahady ny mpankafy azy.
Saingy mitana ny dikany manokana ho an'ireo miozolomana 25 tapitrisa monina ao Rosia, ka tafiditra amin'izany ireo mpifindramonina mihoatra ny efatra tapitrisa avy ao Azia Afovoany ny fahitana an'i Salah amin'ny Mondialy amin'ity asara ity ao anatin'ny [ekipan'i] Ejipta tsy fantatra endrika.
Any ihany koa, tahaka ny ao Eoropa, mihamitombo isan'andro ny fankahalana ny Islam sy ny fanafihana ny miozolomana, ary nahatratra ny faratampony izany tamin'ny fanapoahana baomba tao St Petersburg tamin'ny herintaona ka niteraka tahotra amin'ny filaminana mandritra ny fifaninanana.
Mety hanome ny fampahatanjahana lavorary indrindra ilay lehilahy bevolombava antsoina hoe Mohamed izay manao am-pifaliana amin'ny fony ny lalao mahafinaritra sy ny tsiky eo amin'ny endriny.